Iindlela ezi-5 zezipho zabazali eziya kukonwabisa kakhulu | Amadoda aQinisekileyo
Izimvo ezi-5 zezipho zabazali
IsiJamani sasePortillo | | Ukunyamekela
Kusenokwenzeka ukuba kubekho amaxesha athile onyaka apho kuya kufuneka unike into abazali bakho. Ukuba unabazali abadala kuya kusiba nzima ngakumbi kuba benganxulunyaniswa netekhnoloji ngokungathi ngabazali abancinci. Nangona kunjalo, kukho imibono emihle yesipho kubazali. Apha siza kukuxelela Izimvo ezi-5 zezipho zabazali ukuba badala kwaye baqhele ngakumbi ukuthanda kwabo ngokuqinisekileyo.
Ukuba awuyazi into oza kuyinika abazali bakho, apha siza kukunika imibono yezipho ezi-5 zabazali.
1 Yintoni oza kuyinika ngokokuthanda kwakho
2 5 izimvo zezipho zabazali, ngakumbi ukuba badala
2.1 Izipho ezisebenzayo zokhathalelo lomntu
2.2 Ifowuni ephathekayo enezitshixo ezinkulu
2.3 Izipho zoqobo ngentlalontle
2.4 Izipho ezimnandi
2.5 Izipho zokusebenzisa umzimba nengqondo
Yintoni oza kuyinika ngokokuthanda kwakho
Gcina ukhumbula ukuba abantu abadala bathanda ukuchitha ixesha elininzi ekhaya kwaye zininzi izinto ezinokubenza bakhululeke ngakumbi kuloo ndawo. Uninzi lwezi zinto lunokuba luncedo kukonwaba kwasekhaya kunye nokwenza lula ngokubanzi. Kukho izipho ezisuka kwiingubo zokulwa ingqele, iisiliphu zokuhamba ujikeleze indlu okanye iikhola zezitulo. Kwelinye icala, baninzi abantu abadala abaqhele ukuba ngabalandeli abakhulu bekhitshi. Apha sinokuhlasela ngokokuthanda umntu ngamnye. Kule meko, sinokusebenzisa njengesipho izinto ezahlukeneyo zasekhitshini ezinje ngeeseti zokubhaka, iincwadi zokupheka okanye izixhobo ezahlukeneyo zasekhitshini.
Kwabo Bazali badala kodwa hayi badala kangako, sinokukunika into evela kwicandelo lekhompyutha. Kukho iimveliso ezininzi ezinjengeendlela zecapsule, ii-mobiles ezilungelelanisiweyo ezinezitshixo ezinkulu okanye iiwotshi zealam ezinesiprojektha esilingi. Ezi zokugqibela zinomdla kakhulu ngokwembono yokunqongophala kokuhamba kwabantu abadala abaninzi. Izikhululo zemozulu okanye iifreyimu zemifanekiso yedijithali Bahlala bezizimvo ezifanelekileyo kolu hlobo lomntu.
Ukuhonjiswa kwasekhaya yindawo entle enkulu xa ujonge izipho. Umzekelo, inokuba yifoto yosapho kunye nabazukulwana kunye nabantwana kunye nootatomkhulu okanye uthenge ifreyimu entle. Ngenxa yoko, asizukufumana kuphela isipho sokuhombisa, kodwa umnyango wokuvuselela amaxesha adlulileyo kunye nomnqweno wokungalibali abantu abamthanda kakhulu.
5 izimvo zezipho zabazali, ngakumbi ukuba badala
Siza kukunika izimvo ezi-5 zezipho kubazali abadala.
Izipho ezisebenzayo zokhathalelo lomntu
Masingakulibali ukuba nangona abazali bethu sele bebadala, kukho izipho ezahlukeneyo ezinokumiselwa kukhathalelo lwemiba yobuqu. Ungaqala unikezela ngesiqholo okanye icologne. Olunye uhlobo lwezixhobo eziluncedo kukhathalelo lobuqu lunokucheba iinwele okanye ukusika iinwele empumlweni nasezindlebeni. Ngokwesiqhelo olu hlobo lwezipho lusebenzela ukubuyisela iincakuba ezindala eziqhelekileyo. Ngale ndlela, baya kubona ukuba le misebenzi yolondolozo lomntu inokuba lula kakhulu kunokuba ibonakala.
Kwelinye icala, unokumnika imveliso eyenzelwe ukhathalelo lweenwele ezinje zizomisi, ezolula iinwele okanye ezirhangqa iinwele. Ngokwesiqhelo amadoda aphulukana neenwele zawo ebudaleni, kodwa bakho abo bangazenziyo. Kukwanjalo nakunyoko. Kukho iimveliso ezininzi zokhathalelo lobuso kunye nomzimba.
Ifowuni ephathekayo enezitshixo ezinkulu
Esi sesinye sezipho ezithatha ikhekhe. Eyona nto iqhelekileyo kukuba ngokuguga ukubona ngokuthe ngcembe kuphulukana nako. Nangona kunjalo, a umnxeba wabadala, yenze ibe nkulu, yinto eyimfuneko kunxibelelwano nabantu. Enye yeengxaki ezinkulu kukuba ezi ntlobo zabantu abayiboni kakuhle ifowuni ephathekayo ngaphandle kweiglasi. Ke ngoko, kuyathakazelisa ukunika iselfowuni enezitshixo ezikhulu okanye iselfowuni yanamhlanje onokuguqula ubungakanani beleta kunye neenombolo ukuyenza ibe lula ngakumbi.
Izipho zoqobo ngentlalontle
Intlalontle yabazali bethu kufuneka ibe phakathi kwezipho ezi-5 zezipho zabazali. Zininzi iintloko zomzimba ezinokukunceda uphumle kwaye kulula ukukwazi ukukhawula iphupha. Ezi massager zinokuba ngumbane kwaye zikhuphe iintlungu ezingapheliyo kwaye ziphumze ulusu kunye nezihlunu. Enye imveliso eluncedo yokunyanga iintlungu zemisipha ziingubo zombane okanye iblankethi engaphantsi. Siyazi ukuba ngokuhamba kweminyaka izihlunu ziyahlupheka ukuba azisebenzi njengoko ziye zonakala. Ndiyabulela kwezi zipho awuyi kuba neenkcukacha ezilungileyo kuphela, kodwa iya kuba yinto eyenza ubomi bakho bube lula.
Esinye sezi zipho zilandelayo sempilo-ntle kukuzibeka ezandleni zengcali. Ungandwendwela i-spa okanye ubaleke kwi-spa. Unokufumana uninzi lwezinto onokukhetha kuzo ukuze bafumane isipho bakube belapho.
Esinye isipho esinokunikwa abazali bethu kukwicandelo lokuzonwabisa. Kwaye ezi zizipho zinezibonelelo ezininzi zempilo. Ingasetyenziselwa ukonwabela kunye nokuphepha iintlungu. Isibini, ivumela ukuba banxibelelane nabanye abantu okanye namalungu osapho. Ungandwendwela icandelo lezemidlalo kubantu abadala apho kuya kubakho uluhlu oluneenkcukacha lweyona midlalo ilungileyo kubo.
Imisebenzi yezandla eziphezulu ingcinga entle. Kwelinye icala, inezibonelelo kwimemori yokuqonda kwaye enye kukuba ikuvumela ukuba uqeqeshe ubuchule bakho ngezandla zakho. Ukongeza, ziya kuvuselela amandla okuyila.
Izipho zokusebenzisa umzimba nengqondo
Okokugqibela, phakathi kwezimvo ezi-5 zezipho zabazali azinakuphosisa ezo zenzelwe imisebenzi yomzimba. Ezi zipho zibenza babe nesibindi sokuzivocavoca umzimba omtsha, ngenxa yoko, abaza kuxela izibonelelo zempilo kunye nokuba sempilweni. Eminye imizekelo yolu hlobo lwenqaku inokuba njalo ukubukela ezemidlalo, izihlangu zezemidlalo zokuhamba ngohlobo oluthile lwezixhobo zokomelela komzimba. Ungandwendwela icandelo lezixhobo zokuzilolonga abantu abadala apho ungafumana uluhlu oluneenkcukacha ngakumbi lokuzilolonga. Ngokwesiqhelo le mithambo ikwanceda ukukhuthaza inkumbulo yakho kunye nokuqeqesha amandla akho engqondo.
Njengoko ubona, zininzi iimbono zesipho kubazali ezinokuba nomdla kungekuphela nje ukunika iinkcukacha ezilungileyo, kodwa ukwenza ubomi bube lula. Ndiyathemba ukuba ezi zimvo zesipho sokuba ngumzali zikunceda ufumane eyona ikulungeleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Izimvo ezi-5 zezipho zabazali
Yeyiphi imbonakalo ephumelele kakhulu kubafazi kwi2020?